Siyaasadda Kuki - BancaNEO
Taariikhda dhaqan galka: 1st June 2021
Nidaamkan cookie-ku wuxuu sharraxayaa sida Bancaneo.org (“annaga”, “annaga” ama “annaga”) wuxuu adeegsadaa buskudka iyo teknoolojiyada la midka ah ee la xiriira www.Bancaneoshabakada .org.
Kukiyada waa faylal qoraal yar oo kombuyuutarka lagaa dhigo oo mararka qaarkood emayl ahaan loo dhigo. Waxay siiyaan macluumaad waxtar leh hay'adaha, taas oo gacan ka geysaneysa in booqashooyinkaaga websaydhyadoodu noqdaan kuwo waxtar leh oo waxtar leh. Waxaan u adeegsanaa cookies si loo hubiyo inaan awoodno inaan fahamno sida aad u isticmaasho degelladayada iyo inaan hubinno inaan horumar ka sameyn karno bogagga internetka.
Kukiyada kuma jiraan macluumaad shakhsi ah ama qarsoodi ah oo adiga kugu saabsan.
Waxaan u isticmaalnaa cookies si aan u hubino inaad sida ugu fiican uga hesho shabakadeena. Marka ugu horeysa ee aad booqato degelkeena waxaa lagaa codsan doonaa inaad ogolaato isticmaalkayaga 'cookies' waxaana kuu soo jeedineynaa inaad ogolaatay inaad u ogolaato cookies-ka inay ku firfircoonaan aaladdaada intaad booqaneyso oo aad booqaneyso boggayaga si aad u hubiso inaad si buuxda ula kulantay shabakadeena. .
Noocyada 'cookies' ee aan isticmaali karno waxaa ka mid ah:
Kukiyada kal-fadhiku waxay soconayaan oo keliya muddada booqashadaada waana la tirtiraa markaad xirto biraawsarkaaga. Kuwani waxay fududeeyaan hawlo kala duwan sida u oggolaanshaha degel inuu aqoonsado in isticmaale aalad gaar ahi uu dhex wareegayo bog ilaa bog, taageerida amniga bogga ama shaqeynta aasaasiga ah.
Kukiyada joogtada ah
Kukiyada joogtada ah ayaa ugu dambeeya ka dib markaad xirto biraawsarkaaga, oo u oggolow degel inuu xasuusto ficiladaada iyo dookhaaga. Mararka qaarkood kukiyada joogtada ah waxaa adeegsada websaydhada si ay u siiyaan xayeysiis bartilmaameed ah oo ku saleysan taariikhda baalashada qalabka.
Waxaan u adeegsanaa cookies-ka joogtada ah si ay noogu oggolaato inaan falanqeyno isticmaaleyaasha booqda bartayada. Kukiyadaani waxay naga caawinayaan inaan fahamno sida macaamiishu u yimaadaan una isticmaalaan bartayada si aan u wanaajinno adeegga guud.
Kukiyada si adag looga maarmo
Kukiyadaani waa lama huraan si ay kuugu suurta geliso inaad ku dhex wareegto websaydhka oo aad isticmaasho astaamaheeda, iyo hubinta amniga khibradaada. La'aantood adeegyadan cookies ee aad codsatay, sida dalbashada alaabada iyo maaraynta xisaabaadkaaga, lama bixin karo. Kukiyadaani ma soo uruuriyaan macluumaadka adiga kugu saabsan ujeeddooyinka suuq-geynta.
Kukiyadaani waxay soo ururiyaan macluumaadka ku saabsan sida booqdayaashu u adeegsadaan degel, tusaale ahaan bogagga booqdayaashu inta badan aadaan, iyo haddii ay farriimo qalad ah ka helaan bogagga internetka. Dhammaan macluumaadka buskudyadan la ururiyo waxaa loo isticmaalaa oo keliya in lagu hagaajiyo sida websaydhku u shaqeeyo, waayo-aragnimada isticmaalaha iyo in la hagaajiyo xayeysiintayada. Adoo adeegsanaya websaydhadeena waxaad ku raacsan tahay inaan ku dhejin karno nuucyada noocaas ah qalabkaaga, si kastaba ha noqotee waad joojin kartaa cookies-ka adigoo isticmaalaya dejinta biraawsarkaaga
Kukiyadaani waxay u oggolaanayaan websaydhka inuu xasuusto xulashooyinka aad sameysid (sida magacaaga isticmaale). Macluumaadka kuukisyadan ay aruurinayaan waa kuwo aan qarsoodi lahayn (yacni kuma jiraan magacaaga, cinwaankaaga iwm) mana raadraacayaan hawshaada daalacashada ee shabakadaha kale. Adiga oo adeegsanaya websaydhadeena waxaad ku raacsan tahay inaan ku dhejin karno noocyada noocaas ah qalabkaaga, si kastaba ha noqotee waad xakameyn kartaa cookies-ka adigoo isticmaalaya dejimaha biraawsarkaaga.
Kukiyadaani waxay soo ururiyaan dhowr qaybood oo macluumaad ah oo ku saabsan caadooyinkaaga dhirta. [Waxaa badanaa la dhigaa shabakadaha xayaysiinta ee qaybta saddexaad]. Waxay xasuustaan ​​inaad booqatay degel xogtan waxaa lala wadaagayaa ururo kale sida kuwa warbaahinta daabaca. Ururradan waxay tan u sameeyaan si ay kuu siiyaan xayeysiisyo bartilmaameed ah
adiga iyo danahaagaba
Fadlan la soco in dhinacyada saddexaad (oo ay ku jiraan, tusaale ahaan, shabakadaha xayeysiinta iyo bixiyeyaasha adeegyada dibedda sida adeegyada falanqaynta taraafikada ee webka) ay sidoo kale isticmaali karaan buskudyada, oo aynaan xakamayn karin. Kukiyadaani waxay u egtahay inay yihiin falanqeyn / waxqabadyo cookies ama bartilmaameedsanaya cookies.
Waad xakameyn kartaa oo / tirtiri kartaa cookies sida aad rabto - wixii faahfaahin ah, ka eeg aboutcookies.org. Waad tirtiri kartaa dhammaan cookies-ka ku jira kumbuyuutarkaaga oo waxaad dejin kartaa daalacashada badankood si aad uga hortagto in la dhigo. Haddii aad tan sameysid, si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaad gacanta ku hagaajiso doorbidyada mar kasta oo aad booqato degelkeenna ama aad isticmaasho Platform-keena iyo adeegyada iyo waxqabadka qaarkood ee aan bixinno ayaa laga yaabaa inaysan shaqeyn.
Si loo xakameeyo ama loo xakameeyo cookies, fadlan eeg qaybta 'Caawinta' ee biraawsarkaaga internetka.